Iifowuni zokuSebenza-Ngaphezulu kwamaqhosha nje kwiphepha lakho leWebhu | Martech Zone
Lwesine, Okthobha 1, 2015 Lwesine, Okthobha 1, 2015 UDustin Clark
Uvile iingqungquthela, iziqubulo, kunye nemixholo yabathengisi abangena kuyo yonke indawo: “Umxholo ngukumkani! ”Ngexesha lokuqhutywa ngumthengi, okushukumayo ukuba kube lula, umxholo wentengiso yedijithali, umxholo phantse yonke into. Phantse ngokuthandwa njenge HubspotIfilosofi yokuThengisa engenayo yenye yezona zinto zibangela intshatsheli: umnxeba wokuthatha amanyathelo okanye i-CTA.
Kodwa ngokungxama kwakho ukwenza izinto zibe lula kwaye yifumane kwiwebhusayithi! ungabuhoyi ububanzi bento a umnxeba ngokwenene kunjalo. Ingaphezulu kweqhosha eliluncedo- smart okanye ngenye indlela-elihlala kwii-imeyile zakho, iibhlog kunye namaphepha okufika kunye nokuthatha abasebenzisi ukuya kwindawo okhetha kuyo.
Kwimpapasho yakutshanje, Isikhokelo sikaMarko kuKhuthazo lweMixholo, IsiQendu sesiThathu (umqeshi wam) sichaze indlela imithombo yeendaba edityanisiweyo- Oko kukuthi, ukusebenzisa ezabanini, ezabelweyo nezihlawulelweyo imithombo yeendaba- ukukhuthaza umxholo kubalulekile kwimpumelelo yomxholo. Kwi-eBook, sinika iinkcukacha malunga nokuba iibhena ze-CTA kunye namaqhosha ayinto ebaluleke kangakanani kwimidiya yokunyusa.
Kodwa zininzi ii-CTAs ngaphandle kwamaqhosha kunye neebhena. Funda ukuze ufunde eminye imizekelo eyimfihlo emithathu apho unokwenza ubizo lokubulala-inyathelo lokukhuthaza umxholo wakho.
Ayothusi into yokuba imithombo yeendaba ehlawulelweyo iyindlela esebenzayo yokufumana amehlo amatsha kumxholo wakho- kuvavanyo lolawulo olunye nenkampani yeinshurensi yezempilo, i-E3 ibone ukwanda kwezithuthi phantse ngama-800% ngenxa yokunyuselwa okuhlawulelwayo kuphela! Kodwa njengoko abathengisi beqhubeka nokwamkela amajelo ahlawulelweyo- i-PPC, umboniso, ukumaketha kwakhona kunye nentlalontle-into enye exhaphake ngokungachazwanga ngumyalezo.
Isicatshulwa sakho sentengiso yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwimizamo yakho ehlawulelweyo- nokuba babhalela kuphela iintengiso zokukhangela okanye babonise imiyalezo yentengiso. Kubandakanya ulwimi olwenziwayo oluthile- funda mores kwaye Cofa ukuze ubone -Kwiikopi zakho zentengiso kubalulekile ukuze unqakraze ngaphakathi. Emva kwayo yonke loo nto, kuya kufuneka ucofe intengiso ngaphambi kokuba ufumane uguqulo lwesithembiso.
Yiyo ke iMeta
Sikwixesha lokungahoyi imiqondiso eqhelekileyo elawulwa ngumsebenzisi, ezinje ngeenkcazo zeemeta, izihloko zamaphepha kunye neethegi zentloko. Akonelanga ukuba uGoogle uyichazile ngokucacileyo indlela ayisebenzisa ngayo le miqondiso ukubeka iiwebhsayithi zethu kwinqanaba, kodwa ezi zinto zihlala zingahoywanga ziyasebenza ngokukuko ekuphuculeni amava akho omsebenzisi- kunye nokucofa kwakho.
[uhlobo lwebhokisi = "impumelelo" align = "" iklasi = "" ububanzi = "90%"]Imfihlelo: Ukusetyenziswa okukuko akuyinyusi kwaphela i-SEO yakho, kodwa ukungabikho kwazo luphawu olucacileyo lokuba iwebhusayithi yakho ayikhathali kwaye kufuneka ingahoywa ziinjini zokukhangela. [/ Ibhokisi]
Phantse wonke umxhasi kunye nethemba eliza emnyango wakho linengxaki enye: idatha yeemeta zijijekile. Ukujijiswa = ukulahleka, kukude kakhulu, ukuphinda umxholo okanye nje into ephosakeleyo. Kutheni le nto ibalulekile? Kungenxa yokuba inefuthe elibalulekileyo kwinqanaba lakho, ukugcwala kwabantu kunye nokuguqula.
Ndiyayazi le nto uyithethayo. Yiza, mfo. UGoogle sele ethe abayisebenzisi inkcazo yemeta kwizinga lokukhangela. Kwaye uza kuchaneka. Kodwa into eqwalaselwa nguGoogle kukucofa ngenqanaba ukusuka kwiinjini yokukhangela kwiphepha lakho- kunye nefayile ye- inye kwaye kuphela ulawulo onalo kwezi zihloko zemeta kunye neenkcazo. Le miqondiso ziifowuni ezicacileyo zokwenza isenzo kwithemba lakho, iindwendwe ezinokubakho kwindawo kunye nentengiso yakho elandelayo.
Ngaba awuqinisekanga? Zama oku kubungakanani-kwimeko yesoftware, i-Element yesi-15 inyuse izinga lokucofa (CTR) ukusuka kuGoogle ukuya kumaphepha ewebhu nge-5% - kuphela ngokuhlaziya izihloko zeemeta kunye neenkcazo. Ayisiyiyo yonke into - nolu uluhlu lwee-metric eziphambili ze-XNUMX eziphuculwe ngezi kuphela
Ukucofa - kuphuculwe i7.2%
CTR - kuphuculwe i15.4%
Inani labatyeleli - kuphuculwe i10.4%
Inani labatyeleli abatsha kuphuculwe i8.1%
Ireyithi yokuncipha - kuphuculwe i10.9%
[ibhokisi yohlobo = "inqaku" lungelelanisa = "ulungelelwaniso" iklasi = "" ububanzi = "90%"]Isifundo: yeka ukungahoyi imiqondiso yewebhusayithi kulawulo lwakho- nditsho nezo "meta" zifihliweyo. Zibalulekile kuGoogle. Zibalulekile kubasebenzisi bazo. Zifanele zibaluleke kuwe. [/ Box]
Umsitho weNtlalontle weMillennium
Imfihlelo iphuma kwezentlalo - iiposti ezineefoto ukuthanda ngakumbi kunye neempendulo ezingaphezulu ngaphezu kwabangaphandle.
Kwaye amaqonga akutshanje entlalontle aphantse aqhutywa ngokufota, ukusuka kwi-Instagram ukuya kwiTinder.
Kodwa uchitha ixesha elingakanani emva kokukhetha umfanekiso ogqibeleleyo ukwenza umyalezo kanye, ngobuqhetseba? Ukudala ukungxamiseka kunye nokusebenza kwizithuba zakho zemidiya yoluntu kubalulekile, kwaye i-CTA eyakhiwe kakuhle kufuneka ibe sisiqalo, hayi isiphelo.
Cinga ngento ofuna ukuba bayenze abasebenzisi, ufuna ukuba bayenze njani, kwaye nini. Qiniseka ukuba ezi zilunge ngandlela thile- nokuba ubalo lwabalinganiswa beposti yakho.
Ewe unokwenza isenzo kwimifanekiso yakho kunye neevidiyo, nazo. Iifoto zeemveliso ezintsha, abantu bavula iiphakeji, izinto ezintsha eziqaqambileyo-uluhlu luyaqhubeka kwaye lubonwa ngokubonwayo.
Ividiyo inikezela nangakumbi ithuba lokuzithengisa kumathuba akho. Faka ngokucacileyo iifowuni-zenzo kwiimpawu zakho zevidiyo kunye ne-goodbyes. Yazisa abasebenzisi ukuba uyakhathala, ukhona kwaye ukulungele ukuphendula.
Yigcine iphakamileyo kwaye iqine
Okokugqibela, khumbula ukuba ukwilizwe elihambayo. Ukulula akuthethi umxholo omncinci- kodwa kuthetha ingxolo encinci phakathi kwabasebenzisi bakho kunye neyona njongo iphambili. Sebenzisa iifowuni zakho kwisenzo kwangoko kwaye rhoqo. Rhoqo, singcwaba amaqhosha ethu, amagama ezenzo kunye nokuhlawulwa okukhulu ezantsi kwephepha.
Endaweni yoko, qiniseka ukuba i-quid proo iphambili kwaye iziko-okanye ubuncinci ngaphezulu kwesibaya. Gcina umyalezo wakho ukuya kwinqanaba. Sebenzisa izenzi ezinje ngokufunda, ukufunda, kunye nokufowuna, kwaye uye kwinyama yezibonelelo zakho kwakamsinya kunakwelixa lizayo. Ungasisebenzisa kwaye usisebenzise esi sikhokelo kuyo yonke le mizekelo ingasentla ye-CTA- iibhena, amaqhosha, ukukhangela okuhlawulelweyo (bhida ngaphezulu kwizinto ezingaphantsi - ukuba awuphumeleli, ayifanelekanga ukuba uyibhidi ...), bonisa kwaye uhlawule iintengiso zentlalo, ividiyo , umyalezo wentlalo, kunye nolwazi lwakho lweemeta.
Thatha umbhali wakho ukuze ukhuphele isiselo, mnike intengiso efanelekileyo, kwaye usebenze-sebenzisa amagama akho kakuhle. Iifowuni zakho zokwenza isenzo kunye nabathengi bakho baya kukuthanda kwakhona.
tags: umnxeba kwisenzoukubizelwa kwimeko
UDustin usebenza njengesicwangciso sedijithali esikhokelayo Isiqendu sesithathu, Esebenzisa amava akhe eqhuba imikhankaso yentengiso kwi-Intanethi yeFortune 500 kunye namashishini amancinci endawo ngokufanayo.
NguyenNguyen @ NguyenNguyenXNUMX
Okt 2, 2015 ngexesha 5:05 AM
Enkosi @marketingtechblog kunye @dustinclark Ingcebiso eluncedo kakhulu. Vumelana ngakumbi nezimvo zedatha yewebhusayithi yakho. Njengoko usazi ukuba idatha yakho ye-meta (umz. Isichazi sewebhusayithi) ikopi yakho yentengiso yohlobo lophawu lwewebhu kwiwebhu ejongwa ziinjini yokukhangela. Kananjalo kufanele ukuba ilungiswe kakuhle kwaye yenziwe ngobuqili njengentetho kamongameli. You Njengoko usitsho, uninzi lwenkampani alunakho ukuphumelela ngokukhawuleza. KwiAltaire sisebenza nabathengisi be-imeyile kwimikhankaso yabo ye-imeyile yeKrisimesi ngoku sinceda ukulungiselela kunye nokuvavanya zonke izinto ezinokwenzeka. Kodwa ukuba iiwebhusayithi azikakulungeli amathuba anokumoshwa. Ndiza kudlula kwiingcebiso zakho.